एभिन्युज टेलिभिजनफ्राईडे रिलिज : ‘जात्रै जात्रा’ र ‘वीर विक्रम २’को भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ? - एभिन्युज टेलिभिजन
3 Jestha 2076 Friday 8:23 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : करीब साढे २ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जात्रा’को सिक्वेल ‘जात्रै जात्रा’ र ‘वीर विक्रम २’ शुक्रबारबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको छ । दुवै फिल्मप्रति दर्शकमा ठूलो अपेक्षा छ । आफ्नो फिल्मले राम्रो दर्शक तान्नेमा दुवै फिल्मका निर्देशक विश्वस्त देखिन्छन् । कुन फिल्मले बाजी मार्ला त्यो त फिल्मको प्रदर्शनको केही दिन त कुर्नै पर्छ ।
फिल्म ‘जात्रै जात्रा’को पहिलो फिल्म ‘जात्रा’ले व्यावसायिक र समीक्षात्मक सफलता हात पारेको थियो । सिक्वेलले यो विरासत धान्न सक्ला वा नसक्ला ? धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ । फिल्मका निर्देशक प्रदीप भट्टराई हुन् । मल्टीप्लेक्सहरुमा पाएको सोज संख्या हेर्दा यो फिल्मले बक्सअफिसमा बम्पर व्यापार गर्ने देखाउँछ । फिल्मले राजधानी भित्र र बाहिरका अधिकांश मल्टीप्लेक्सहरुमा उच्च सोज हात पारेको छ ।
बुधवार साँझबाट नै मल्टीप्लेक्समा फिल्मको बुकिङ खुल्ला गरिएको थियो । अग्रिम बुकिङमा फिल्मलाई क्यूएफएक्स चेनले राजधानीको ५ स्टेशनमा १९ सोज बाँडेको छ । यस्तै, मोफसलतर्फ क्यूएफएक्सको पोखराको सिनेप्लेक्स हलमा ४ शो, चितवनको जलमा हल, नेपालगन्जको बाग्गेश्वरी हल र विर्तामोडको हलमा फिल्मले ३–३ सोजमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै छ ।
यस्तै, राजधानीमा सञ्चालित अन्य मल्टीप्लेक्स हलहरुले क्यूज सिने र सिडिसी सिनेमाले फिल्मलाई ५–५ शो बाँड्दा बिग मुभिज, एफक्यूब, र विएसआर मुभिजले समान्तर ४ शो प्रदान गरेका छन् । फिल्ममा विपिन कार्की, दयाहाङ राई, रविन्द्र झा, रविन्द्र सिंह बानियाँ, वर्षा राउतलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
त्यस्तै यो फिल्मसँग एकसाथ प्रदर्शनमा आएको अभिनेता पल शाह स्टारर फिल्म ‘बीर विक्रम २’ ले जात्रै जात्राको तुलनामा केही कम सोज पाएपनि मल्टीप्लेक्सहरुमा राम्रै सोज पाएको छ । क्यूएफएक्स चेनले राजधानीको ५ स्टेशनमा फिल्मलाई १२ सोज प्रदान गरेको छ । अन्य मल्टीप्लेक्सहरुले पनि फिल्मलाई राम्रो सोज दिएका छन् ।
फिल्म ‘वीर विक्रम २’ लाई मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्ममा प्रदीप भारद्वाजको कथा छ भने पल शाह, वर्षा शिवाकोटी, नाजिर हुसेन, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ । चलचित्रलाई वीर र विक्रमको मित्रताको कथा भनिएको छ । फिल्मले हिमाली गाउँको कथालाई कथानक बनाइएको छ ।